စားချင်လာပြီ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » စားချင်လာပြီ
Posted by ရွှေ မင်း သား on May 29, 2011 in Creative Writing | 11 comments
ကဲ ပေါက်ကရ အတွေးများစလိုက်ရအောင်။
ကျနော် အရင် ဆုံးစတွေးမှာက တော့ ကျနော်တို့ ဘာလို့ ထမင်းတွေစားနေရတာလဲ
ထမင်း၊ ဒါမှမဟုတ် ဗိုက်ပြည့် မယ့် အစားအစာတစ်ခုခု စားကြရတယ်။
နေ့တိုင်း စားနေရတာ မပျင်းဘူးလားဗျာ။ ခင်ဗျားလဲ စားတယ်။ ကျနော်လဲစားတယ်။ အားလုံး လဲ စားနေကြတယ်။ မစားရင် ဘာဖြစ်မလဲ
မစားရင် ငတ်သေရုံဘဲ ပေါ့။ ဘာလို့ သဘာဝ ကြီးက စားဖို့ သတ်မှတ်ထားရတာလဲ။
ဒီစားဖို့ သောက်ဖို့ကို အခြေခံ ပြီး လူတွေ အလုပ်လုပ်ကြရတယ်။
တစ်ရက်လဲ မဟုတ် တစ်လ လဲ မဟုတ်။ ဒီ စားဖို့ သောက်ဖို့ အတွက်နဲ့ နေ့တိုင်း ရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေရတယ်။
ဒီလိုစားဖို့ သောက်ဖို့ ရုံးကန် လှုပ်ရှားရင်း လူတွေမှာ ချမ်းသာတာ ဆင်းရဲတာ တွေ ဖြစ်လာရော။
သူက ကောင်းကောင်း စားရတယ်။ ဟိုတစ်ယောက်က တော့ ကောင်းကောင်းမစားရဘူး။ စသဖြင့် ကွဲပြားမှုတွေ ဖြစ်လာရော။
ကောင်းကောင်းစားရတဲ့ သူက ကောင်းကောင်း အလုပ်လုပ်လို့ လား။
ကောင်းကောင်း မစားရတဲ့သူက ကောင်းကောင်း အလုပ်မလုပ်လို့ လား။
မေးစရာ ဖြစ်လာရော။ ကဲ အားလုံး ဘယ်လို သဘောရသလဲ…
ဒီဘက် ခေတ်မှာ တော့ အဲဒီမေးခွန်းနဲ့ အဖြေညှိလို့ မရနိုင်လို့ ထင်ပါတယ်။
အလုပ်ကို ကောင်းကောင်းလုပ်တိုင်းလဲ ကောင်းကောင်းမစားရပါဘူး။
အလုပ်ကို ကောင်းကောင်း မလုပ်ဘဲ ကောင်းကောင်းစားနေတဲ့သူတွေလဲ ရှိပါတယ်။
ဟိုးရှေးခေတ် ကျောက် ခေတ် မှာဆိုပါစို့ အမဲ ကောင်းကောင်းလိုက်ထားရင် ကောင်းကောင်းစားရမယ် ။ ဒါတော့ သေချာတယ်.
နောက် တစ်ယောက်က အမဲလိုက်တော်တဲ့သူကို အပီပေါင်းထားမယ်ဗျာ ၊ အမဲလိုက်တော်တဲ့သူဆီက ရလာတဲ့ အမဲတွေ ကို တောင်းစားမယ်ဗျာ။ ဟိုလူ စိတ်ကြည်နေတုန်းတော့ ပေးမှာပေါ့။
ဒါဆို ဒုတိယလူလဲ ကောင်းကောင်းစားရတာဘဲလေ။
ဒီဘက်ခေတ်မှာ ရော အဲဒီသဘောလေးတွေ ရှိနေတုန်းပါဘဲ
ရှေးခေတ်က နဲ့ တော့ အားလုံးတော့ မတူတော့ဘူး။ နည်းနည်းပြောင်းသွားတယ်။
ဘာလဲ ဆိုတော့ အရင်တုန်းက အမဲ လိုက်ေ ကာင်းတဲ့သူက အမဲ တော့ ရမှာ သေချာတယ်။
ဒီခေတ်မှာ တော့ အမဲလိုက် ကောင်းပေမယ့် အမဲ ရချင်မှ ရမယ်။ မရချင် မရဘူး။
အရင်ခေတ်တုန်းက ပေါင်းတတ်သင်းတတ်ရင် တောင်းစားလို့ အဆင်ပြေနိုင်သေးတယ်။
ဒီဘက်ခေတ်မှာ တော့ ပေါင်းတတ်သင်းတတ်ရင် တောင် လေနဲ့ ပေါင်းလို့မ ရတဲ့ ခေတ်။
နောက်တမျိုးစဉ်းစားမယ်ဗျာ။ စားဖို့ သောက်ဖို့ အတွက် အလုပ်လုပ်ကြတယ် ဆိုပေမယ့် ဒီခေတ်မှာ ဒါလုပ်ဒါစားဆိုတဲ့ ပုံစံခွတ်က ပျောက်လုလု ဖြစ်နေပြီ။
လုပ်စရာ တွေလဲ အလွန်ပေါ။ လုပ်စရာ ရှိတိုင်း လုပ်လို့ စားစရာ ပေါ်လာ မယ်တော့ မထင်နဲ့ ။ မှားသွားမယ်။
၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေ ၊ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေ ၊ ကုန်သည်ပွဲစားလုပ်ငန်းတွေ ပေါမှပေါ။ ဒါပေမယ့် လုပ်တိုင်းစားရမယ်တော့ မထင်နဲ့။
ကံ၊ ဥာဏ် ၊ ၀ရိယ ရှိရင် တော့ အောင်မြင်ချင် အောင်မြင်မယ်။ ဒါတွေ က အလုပ်လုပ်ရာမှ တကယ် အရေးကြီးတဲ့ အချက်တွေပါ။ ဒါတွေ မရှိဘဲ နဲ့ လုပ်တဲ့ အလုပ်က မအောင်မြင်နိုင်ပါ။ အလုပ်အောင်မြင်တိုင်းလဲ ၀၀ လင်လင် စားရမယ် လို့ မဆိုနိုင်။
ပေါင်းတတ်သင်းတတ်ရင် တော့ ကုန်းရုန်း ရှာတာထပ်တော့ ပို ပြီးအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် သူလဲ အလကားပေါင်းလို့ မရတဲ့ ခေတ် ကိုရောက်နေပြီ။ ပေါင်းနိုင်သင်းနိုင်အောင် ဆိုရင် သင့်တော်တဲ့ အလုပ်လေး လဲ ရှိအုန်းမှ။
လက်ဗလာနဲ့ ပေါင်းလို့သင်းလို့ အဆင်မပြေနိုင်။ ဒါကြောင့် အောင် မြင် တဲ့ အလုပ်လေး လဲ လုပ်နိုင်မှ တော် ရာကျမယ် လို့ ထင်တယ်။
ရှေးခေတ် အသုံးနှုန်းနဲ့ ပြန်ပြောရင် အမဲ လိုက်လဲ ကျွမ်း ရမယ်။ ပေါင်းလဲ ပေါင်းတတ်ရမယ်။ ဒါမှ ဒီခေတ်မှ စားကောင်းသောက် ကောင်းတွေ စားနိုင်မှာ……
ပေါက်ကရ အတွေးတွေ ရပ်လိုက်တော့ မယ်။
စာလုံးပေါင်းမှာ ရင် ခွင့်လွှတ်ကြပါ။ အော် ပြင်နိုင်အောင် မှားတာလေးလဲ ပြောပြပေါ့။
ဒါပေမယ့်လဲ အကောင်းတွေစားထားတာ ပြန်အံမထွက်ဘို့တော့ လိုမယ်နော်.။
အစားမတော်တလုတ် အသွားမတော်တလှမ်းတဲ့ ။ အဲ့ဒီ စကားပုံက အလကားတော့ ပြောထားတာ မဟုတ်ဘူး
Basic human wants and needs ဆိုတာရှိတယ်..။ စား၊၀တ်၊နေရေး အခြေခံလိုအပ်ချက်ဆိုပါတော့…။
တိုင်းပြည်တပြည်မှာ.. လူတွေရဲ့ Basic wants and needsကိုဖြည့်ပေးဖို့က..အစိုးရတာဝန်ပဲ..။
အဲဒီမှာ.. နေ့စဉ်အဟာရပြည့်ဝတဲ့.. တမင်းနပ်မှန်အောင်စားရမယ်ဆိုတာပါတယ်..။
အလုပ်လုပ်ရက်နဲ့.. အပြင်းအထန်လုပ်ရက်နဲ့.. လုံလောက်တဲ့ဝင်ငွေမရရင်..အစိုးရရဲ့.. စံနစ်မှားနေလို့ပဲ..။
စံနစ်မှားတာဟာ.. အဲဒီဆိုင်၇ာတိုင်းပြည်က… လူထုအများစုကြီးရဲ့.. တဦးချင်းစီရဲ့.. အတွေးအခေါ်တွေနဲ့ဆိုင်တယ်..။
ဒီကနေ.. လူထုဟာ..ကိုယ်နဲ့တန်တဲ့အစိုးရပဲရမယ် ဆိုတဲ့… မှတ်ချက်ကို… ထပ်ခါ…အတည်ပြုမိစေတယ်..။
အပေါ်က စာရဲ့ အချက်ကလေးတချက်ကိုပဲ..စဉ်းစားကြည့်ရအောင်..။
“ကျနော်တို့ ဘာလို့ ထမင်းတွေစားနေရတာလဲ
နေ့တိုင်း စားနေရတာ မပျင်းဘူးလားဗျာ။ ခင်ဗျားလဲ စားတယ်။ ကျနော်လဲစားတယ်။ အားလုံး လဲ စားနေကြတယ်။ “
( ပုဂ္ဂိုလ်ရေး တိုက်ခိုက်တာမဟုတ်ပဲ.. သဘောတရားချပြလိုတဲ့အတွက် ယူသုံးတာလို့ နားလည်စေချင်ပါတယ်..)
သာမန်မြန်မာတယောက်ဟာ.. ကြက်သားဟင်းနဲ့စားရင်.. ကောင်းတယ်..နားလည်မှာပါ..။
တကယ်တော့ ..လူရဲ့ လိုအင်ဆန္ဒဆိုတာ.. ဒီမှာတင်မရပ်သွားပါဘူး..။
ဈေးနှုန်းလည်း သိသိသာသာ ကွာသွားတယ်..။
ကြက်ရဲ့အကောင်းဆုံး အစိတ်အပိုင်းစားချင်သူဟာ.. ငွေပိုပေးဝယ်ရတယ်..။
ဒီလိုနဲ့.. အလုပ်တွေ..ငွေတွေလည်ပါတ်မှုဖြစ်လာတယ်..။ လူနေမှုအဆင့်အတန်းတိုးတက်လာတယ်..။ ဆိုင်ရာ ပရိုဖက်ရှင်နယ် ပညာရပ်ျွှေထပ်ထပ်ထွက်လာတယ်…။
ဒါတွေကို.. ရပ်တန့် စေနိုင်လောက်တဲ့.. တခုတည်းသော အကြောင်းတရားတခု ရှိတယ်..။
လူတွေ သက်သတ်လွတ်စားဖို့.. ရိုက်သွင်းတာမျိုးပဲ..။( ဒါကိုလည်း.. သက်သတ်လွတ် သမားတွေတိုက်ခိုက်တာလို့ မယူစေလိုပဲ.. ဥပမာတခုအနေနဲ့ ထင်ရှားပြလိုရင်းလို့ မှတ်ပေးပါ)
ဒါကို.. ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာတရားနဲ့ ဆက်စပ်ဖွင့်ဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာ.. လူတွေဟာ.. အဲဒီလိုခံစားနိုင်တဲ့ အခွင့်အလန်းတွေအားလုံး စွန့်လွတ်လိုက်တော့တယ်..။
အဲဒီတော့… ဆိုင်ရာဆိုင်ရာတိုင်းပြည်တွေရဲ့.. လူတွေရဲ့..အတွေးအခေါ်တွေ ဘယ်လောက်အေ၇းကြီးသလည်း.. သိသာမှာပါ..။
BASIC WANTS. – The four basic human wants are the following: l I want to live and be healthy. The most basic wants of all are life and health. l I want to love and be loved. This includes the family love of parents, spouse, children, and other relatives as well as the social acceptance, admiration, and respect of peers, subordinates, and superiors alike. l I want to feel important. Everyone wants to feel that they have importance and self-worth. l I wantalittle variety. It is said that variety is the spice of life. Variety can take many forms, from seeing different places, to doing different kinds of work, or meeting different challenges. Everyone wants to grow beyond their current horizons. BASIC NEEDS.– The five basic human needs are the following: l Survival. These are the basic needs such as air, food, water, and shelter. Obviously survival needs are the first needs to be considered. l Security. Once most of our physical needs are met, we look ahead to future safety. Security needs relate to an orderly, stable, predictable environment. Stability can haveadifferent meaning for different
ကိုခိုင်ပြောတာကို ထောက်ခံပါတယ် ….
ကျွန်မတို့မိသားစုမှာဆိုရင် အဖေရဲ့ အဓိကစီးပွားရေးဝင်ငွေနဲ့ မှီခိုနေကြရပါတယ် … အခုအချိန်မှာ အဖေက အသက်လဲကြီးလာပြီ .. ကျွန်မတို့မှာလဲ ကိုယ်ပိုင်အလုပ်အကိုင်နဲ့ စားဝတ်နေရေး အားလုံးပြည့်စုံနေပါတယ် … အဲဒါနဲ့ အဖေ့ကို အလုပ်မလုပ်တော့ပဲ နားဖို့ ကျွန်မတို့ကပြောတော့ .. အဖေက ပြန်ပြောတယ် …
သမီးတို့ကို အခုစီးနေတဲ့ကားထက် ပိုကောင်းတဲ့ကားစီးစေချင်တယ် …. အခုနေရတာထက် ပိုသက်တောင့်သက်တာဖြစ်အောင် နေစေချင်တယ် … အခုထက် ပိုကောင်းတာတွေကို စားစေချင်လို့ အဖေအခုထိ အလုပ်ဆက်လုပ်နေတာတဲ့ …
မိသားစုတိုင်းမှာသာ ကျွန်မအဖေလို အိမ်ထောင်ဦးစီးမျိုးရှိရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲနော် ….
မဝေ ကတော့ အဖေ ဆိုတဲ့ အိမ်ထောင်ဦးစီ ရှိသေးတော့ အဲလို ပြောနိုင်တာပေါ့။
အဖေ မရှိတော့တဲ့ အိမ်ထောင်ဦးစီး မဲ့နေတဲ့ မိသားစုဆိုရင် အဖေ ဆိုတဲ့ ရွှေတောင်ကြီးကို အခါခွင့်သင့်တိုင်း သတိရနေရတယ်။ အဖေ ကိုတောင် သတိရမိတယ်။
ကိုယ်ကိုတိုင်လဲ အိမ်ထောင်ဦးစီး ဖြစ်နိုင်တာပါပဲ မဆူးရယ်။
သူတို့အတွက် ကောင်းအောင် ဖန်တီးပေးချင်လုပ်ပေးချင်တဲ့စိတ်
ဘာမှမတတ်နိုင်လို့ လက်ပိုက်ကြည့်နေရရှာတဲ့ မိဘတွေအများကြီးပါ။
လောက မှာတစ်ကယ်လုပ်ရင်ဖြစ်တယ်လို့ ကြုံးဝါးကြပေမယ့်
တကယ်ဖြစ်မလာတာတွေက % တော်တော်များများရှိပါတယ်။
အဲဒါကြောင့်လဲ သိပ်ကောင်းမှာပဲနော်လို့ ရေးလိုက်တာပေါ့ ကိုပေါက်ရယ် …. အားလုံးကို ကံကောင်းစေချင် တိုးတက်စေချင်တဲ့ ဆန္ဒနဲ့ပေါ့ …
လောလောဆယ်အခြေအနေမှာတော့ စားချင်နေကြတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အလုပ်လုပ်နေရတယ် … သူများတွေ စားချင်လေ .. ကျွန်မက ရွဲ့ပြီး မစားချင်လေဖြစ်ရင်းကနေ အခုတလော သတ်သတ်လွတ်ချည်းပဲ စားဖြစ်နေတော့တယ် …
ဝေေ၀ရေ like လုပ်လိုက်တာ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး dislike ဖြစ်သွားသလဲ မသိဘူးနော်။ sorry ပါ။ +လို့ပဲ ဖြည့်တွေးလိုက်နော်။
ကဲ ကွာ ရွှီးလိုက်မယ် …
ကြာကြာဝါးမယ့်သွား အရိုးကြည့်ရှောင်နော် ..
ကောင်းကောင်းစားချင်ရင် ကိုယ်က လှူတဲ့အခါမှာလည်း စိတ်ရင်းစေတနာ မမှန်နဲ့ ကောင်းကောင်းလေးလှူပါ … သူများကို ပေးတဲ့အခါမှာလည်း ကောင်းကောင်းလေးပေးပါ … ဒါဆိုရင် ကိုယ်ကလည်းကောင်းကောင်းစားရတတ်ပါတယ်တဲ့ ….